नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रचार प्रसारको तयारी र तरिका – Hatuwa Herald
Home > समसामयिक > नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रचार प्रसारको तयारी र तरिका
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रचार प्रसारको तयारी र तरिका
हतुवा हेराल्ड ३ कार्तिक २०७६, आईतवार October 20, 2019 समसामयिक	0
विश्व अल्ट्रा म्याराथनमा आफूलाई स्थापित गरेर नेसनल ज्योग्राफिक महिला वर्ष खेलाडी:२०१६ समेत प्राप्त गरिसकेका नेपाली धाविका मीरा राईले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै देशको नामलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराउदै आएकी छिन । भर्खरै मात्र दक्षिण कोरियामा कोरियन सरकार अन्तर्गतको एउटा एथ्लेटिक्स कार्यक्रममा सहभागी हुन आउँदा उहाँसँग भेट भो । खुशी लाग्यो । धेरै कुराकानी भयो । कुराकानी पछि visit 2020 को सम्बन्धमा केही कुरा मेरो मनमा लाग्यो र लेख्दैछु ।
• करिब ४० लाख नेपाली रोजगारी लगायत अन्य विभिन्न सिलसिलामा विभिन्न देशमा रहेका छन् । गणितिय हिसाबमा ४० लाख नेपालीले १/१ जनाको दरले विदेशीलाई नेपाल पठाउँदा Visit 2020 त त्यतिकै सफल हुने देखिन्छ । तर यो व्यवहारिक रुपमा कठिन छ । किनकी ९५ % नेपाली त काम गर्न गएका छन् । उनीहरुसँग विदेशीलाई कन्भिन्स गरेर नेपाल घुम्न आउ भन्ने सैदान्तिक र व्यवहारिक आधार नै हुँदैन र भए पनि ती विदेशीले उनीहरुको कुरा सजिलै पत्याउँदैन अनि सिधा रुपमा त्यहाँको मालिक वा साहुहरुसँग सीधा सम्पर्कमा जाने अवसर पनि हुँदैन सबैको । ती नेपालीहरुको भेटघाट प्राय आफू जस्तै नेपालीहरुसँग मात्र धेरै हुन्छ ।
• नेपाली ख्यातीप्राप्त कलाकारहरु पनि अत्यधिक विदेशका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन जान्छन । तर उनीहरु पनि विदेश गएर प्राय नेपालीहरुसँग मात्रै भेटघाट गर्छन् नेपालीहरुले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुमा मात्रै सहभागी हुन्छन् । विदेशीहरुसँग सम्पर्कै हुँदैन । Visit 2020 मा खासै योगदान नदेखिने भो ।
• विभिन्न स्कोलरसीपमा विधार्थीहरु पनि विदेश जान्छन । उनीहरुको साथी भनेका विधार्थीहरु नै हुन जोसँग पर्याप्ति घुम्ने पैसा हुदैन । तथापि रिपोर्ट प्रेजेन्टेसनमार्फत प्रोफेसर र आफना साथीहरुलाई Visit 2020 को बारेमा अलिअलि जानकारी दिन सकेमा एकदमै कम भएपनि योगदान रहन सक्छ ।
• ३ महिने visit visa मा घुम्ने नेपालीहरुले अलि अलि पर्चा पम्प्लेट बाँड्यो भने केहीलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने देखिन्छ ।
• र विदेश गइरहने अर्को समूह भनेको विभिन्न खेलाडीहरु हुन । उनीहरु मात्रै त्यस्तो समूह वा व्यक्ति हुन जो अन्तराष्ट्रिय मैदानमा विदेशीहरु सँगसँगै खाने बस्ने डुल्ने अवसर प्राप्त गर्छन । उनीहरु पहिले आफनो देशको नाम बोक्छन अनि दोस्रोमा आफ्नो नाम । खेल यस्तो विषय हो जसले देशलाई राजनीतिक नेतृत्व र प्रणाली भन्दा पछि विश्वमा सजिलै परिचित गराउँछ । तसर्थ Visit 2020 लाई सफल बनाउनमा खेलाडीहरुको योगदान महत्वपूर्ण रहन्छ । जस्तो मीरा राई अन्तराष्ट्रिय धाविका हो । सन्दिप लामिछाने अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटर हो । किरण चेम्जोङ, सोमपाल कामी, नवयुग श्रेष्ठ, मनोज मल्ल, हिक्मत घर्तीमगर, सुनमाया बुढा, तेजबहादुर देउवा, दिपक बोहोरा आदि नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा चिनाइरहेका खेलाडीहरु हुन । यदि उनीहरुलाई सरकारले Visit 2020 दुत बनाएर केहि कार्यक्रम तय गरेमा धेरै हदसम्म विदेशीहरु नेपालप्रति आकर्षित हुने संतभावना छ । अनि हामी जो अभियानलाई सफल पार्न तयार गर्दैछौं के सोच्नु आवश्यक छ भने फेसबुक र ट्वीटरको प्रयोग गरेर Visit 2020 सफल बनाउन त खासै प्रभावकारी देखिदैन । किनकी अधिकाशं facebook र twiter चलाउनेको विदेशी साथी नै छैन । जति Photo, status र tweet राखे पनि हेर्ने त्यै काठमाडु र अन्य सहरका नेपालीहरु नै हुन । विदेशमा रहेका केही नेपालीले हेर्ने हुन । गाउँका केहीले हेर्ने हुन । त्यति हो । अनि विदेशी पर्यटक कसरी आउँछ र ? यसका लागि विदेशी साथी बनाउन जरुरी छ । अन्त्यमा, सरकारले नेपालमै के के गर्छ त्यो एकातिर छ । संरचना, नीति, कार्यक्रम, लगानी र व्यवस्थापन सबै सरकारकै काम हो । पक्कै गर्ला वा बनाउला ।
सगरमाथा हाम्रै देशमा छ । गौतम बुद् नेपालमै जन्मेका हुन । गोर्खाली भनेकै नेपाली हो । यस्ता कुरा त कति छन हामीसँग तर विदेशीहरुलाई कसरी जानकारी दिने त ? माध्यम खोज्न जरुरी छ त्यसको लागि अन्तराष्ट्रिय मन्च जसले प्रयोग गर्छ त्यसलाई समात्न सक्नुपर्छ । तसर्थ धेरै माध्यम मध्ये एउटा माध्यमको रुपमा विदेश स्थित गठन भएका नेपाली संस्थाहरुलाई यो अभियानमा जोड्ने निति सार्वजनिक गर्न जरुरी छ जस्तो कोरियामा १३० भन्दा बढी संस्थाहरु छन् । केही संस्थाहरु यहाँका कोरियन सरकार र संस्थाहरुसँग नजिक पनि रहेका छन । त्यस्ता संस्थाहरुलाई प्रयोग गर्न सके र अर्को माध्यमको रुपमा माथि उल्लेख गरे अनुसार अन्तराष्ट्रिय छवि बनाएका खेलाडीहरुलाई अभियानमा समावेश गर्न सके Visit 2020 मात्रै हैन समग्र देशको समूद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
नेपाल सरकार शाखाअधिकृत, हाल:सुन्क्युन्कावान युनिभर्सिटी सिओल कोरिया
Hatuwa HeraldNepali SandeshShankar Hari Khalingनेपाल भ्रमण वर्ष २०२०
द भोईस अफ नेपालको ब्याटल राउन्ड सकियो : अब टप १२ को छनौट हुने
कुबेर राईको नयाँ गीत “यो मन जलेर के भो…”
बुङ्वाखाको १५औँ बार्षिकोत्सवमा प्रदान गरिने पुरस्कारको टुङ्गो लाग्यो